DIFFICILE Archives - Page2sur2- TELES RELAY
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 26, 2020 0
၁။ Ansu Fati နှင့် Pedri ဟာသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်အတွက်အကောင်းဆုံးစပိန်ကစားသမားများဖြစ်သည်။ ၂ ။ Ole Gunnar Solskjaer: ငါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၏တာဝန်ရှိသူများကအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်။ ၃ ။ အာဆင်နယ်ဟာ Flamengo Pablo Mari 1. နောက်ခံလူနဲ့ပိုနီးကပ်လာပြီ။
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 24, 2020 0
နှလုံးကွဲနေတယ်၊ ​​စိတ်ကရောနှောနေပြီးနာကျင်မှုကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ ငါတို့ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါငါတို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဘ ၀ မှာနေရာမရှိတော့ဘူး။ ထိုအရာအားလုံး ...
Meghan Markle နှင့် Prince Harry & # 39; RHS ခေါင်းစဉ်များကျဆင်းနိုင်သည်
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 8, 2020 0
Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့သည်“ ခက်ခဲသောနှစ်” ပြီးနောက် HRH ခေါင်းစဉ်များကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ကောလာဟလသတင်းများအရ Duke နှင့် Sussex of Duchess of Canada မှထွက်ခွာသွားခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်နိုင်သည့်ကနေဒါသို့ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေကြသည်ဟုဆိုသည်။
Meghan Markle ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား Duchess ကကလေး ၀ တ်စုံများကိုဖျက်သိမ်းပြီး၊ ဓာတ်အား ...
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 7, 2020 0
အခြားကလေးမွေးခြင်းသည်တော်ဝင်စုံတွဲအတွက် ဦး စားပေးကိစ္စမဟုတ်ပါ။ (Image: GETTY) var brightcoveBrandsafety = '4 MEGHAN MARKLE နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့အတွက်ကြော်ငြာအားကစားနှင့်အထူးသတင်းများ -
တူနီးရှားရှိအစိုးရသစ် - ကလေးမွေးရန်ခက်ခဲသောအကြောင်းရင်းများ - JeuneAfrique.com
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 3, 2020 0
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Habib Jemli သည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအပြီးရက်သတ္တပတ်များစွာအကြာတွင်သူ၏အစိုးရဖွဲ့စည်းမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ တူနီးရှားလူမျိုးများကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအပြုအမှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးရှုပ်ထွေးနေသည်။
Kate Middleton News: မိသားစုအစားအစာများကိုကိတ်တိုက်ကျွေးပုံ။
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 2, 2020 0
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးသတင်းသတင်း - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်' ကိတ်၊ ကိန်းဘရစ်ချ်စ်မင်းသားနှင့်မင်းသားဝီလျံသည်အောက်တိုဘာလတွင်ပါကစ္စတန်သို့အလည်အပတ်သွားခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလအစောပိုင်းကပါကစ္စတန်ယဉ်ကျေးမှုကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
Queen နှင့် Sophie Wessex: တော်ဝင်အကြိုက်ဆုံးသည်မိဖုရားနှင့်အတူအပြီးသတ်ခဲ့သည်။
Tele RELAY တစ်ခု ဒီဇင်ဘာလ 30, 2019 0
var brightcoveBrandsafety = '4 ကြော်ငြာနှင့်ပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အောင်မြင်သည်။ အားကစားနှင့်အထူးကုသမှုသတင်းများ' Sophie, ၅၄ နှစ်၊ Comtesse de Wessex သည်တော်ဝင်အလုပ်အမှုဆောင်တစ် ဦး မဖြစ်နိုင်ပါ။ အရ ...
တော်ဝင်မိသားစုသည်“ ခက်ခဲသောနှစ်” -“ သူတို့ကိုလျှော့မတွက်ပါနှင့်! & ...
Tele RELAY တစ်ခု ဒီဇင်ဘာလ 29, 2019 0
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးသတင်းသတင်း - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်' ဇန်န ၀ ါရီလတွင် Meghan မင်းသားဖိလစ်၏ကားမတော်တဆမှုသည်တော်ဝင်မိသားစုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကဆိုးရွားလှသည်။
လွန်ခဲ့သော 1 2